Thet Htoo's: တုံ့ပြန်မှု
အစည်းအဝေးခန်းမတစ်ခု . . .
ဒါပေမယ့် အားလုံးရဲ့မျက်နှာမှာတော့ သောကအရိပ်အယောင်တွေက အထင်းသား . . .
နောက်ဆုံးမှာ တိတ်ဆိတ်ခြင်းကို သည်းမခံနိုင်တော့တဲ့ စားပွဲထိပ်က လူကြီးက စကားကို စပါတယ်။
"ကျုပ်တို့ Level3တွေကို ဆက်သွယ်ဖို့အချိန်တန်ပြီ"
"ဘယ်ဖြစ်မလဲဗျ။ သူတို့ကို ကျုပ်တို့ကပစ်ပယ်ထားတာပဲ နှစ်ပေါင်းမှ မနည်းတော့တာ။ အခုလို အကူအညီလိုချိန်မှ ဆက်သွယ်တော့ လက်ပိုက်ပြီး ပျော်ပျော်ကြီး ကြည့်နေမှာပေါ့"
"ဒီလိုလည်း ဘယ်ဟုတ်မလဲဗျာ။ အရေးကြီးတော့လည်း သွေးနီးရမှာပေါ့။"
"ဘာ။ သွေးနီးတယ်ဟုတ်လား။ ကျုပ်တို့မှာ သွေးမရှိတာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။ ကျုပ်တို့ Level2တွေဆိုတာ ၁၆ နှစ်သားဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို စက်တွေနဲ့ အစားထိုးလိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၂၀၀ ခုနှစ်လောက်ကပဲဆိုတာ ခင်ဗျားသတိရဦးမယ်ထင်ပါတယ်။"
"ဟုတ်ပါပြီလေ။ ဒါပေမယ့် အခု Level 1 တွေရဲ့အန္တရာယ်က ကျုပ်တို့ Level2ရော Level3တွေပါ အားလုံးအတွက် ဘုံအန္တရာယ်မဟုတ်လားဗျ"
"တော်ကြပါတော့ရှင်။ ရှင်တို့အခုလို ငြင်းခုံနေမယ့်အစား ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်မပြောတာ ခဏလောက်နားထောင်ပေးကြပါ။ အခု Level 1 တွေဟာ စိတ်ခံစားချက် Software Install လုပ်ပြီးမကြာခင်သူတို့ရဲ့ နိစ္စဓူဝ အလုပ်တွေကို ငြီးငွေ့လာရတယ်၊ ကျန်တဲ့သူတွေကိုရန်ရှာလာရတယ်ဆိုတာ အကြောင်းရှိရမယ်။ Software ရဲ့ Model မှာ ချို့ယွင်းချက်ရှိသလား။ ဒါမှမဟုတ် သူတို့ရဲ့ Software တွေကို တစ်ယောက်ယောက်ကများ Hack လုပ်ခံရသလားဆိုတာ စဉ်းစားစရာပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေတစ်ခုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒီလို ချို့ယွင်းချက်တွေ လုံးဝမရှိအောင်လို့ နှစ်ပေါင်းများစွာသုတေသနလုပ်ပြီးမှ သူတို့ကို Install လုပ်ပေးခဲ့တာပဲ။ အဲဒီတော့ ဖြစ်နိုင်တာ တစ်ခုကို ကျွန်မ စဉ်းစားကြည့်မိတာတော့ စက်ရုပ်တွေဟာ လူလိုခံစားချက်ရှိလာပြီဆိုတာနဲ့ လူဆန်လာပြီး စဉ်းစားနိုင်မှု၊ ကိုယ်ချင်းစာမှု၊ ချစ်ခင်ကြင်နာမှု၊ ရိုင်းပင်းကူညီမှုတွေ ရှိလာနိုင်သလို ပျင်းရိခြင်း၊ လောဘကြီးခြင်း၊ မနာလိုခြင်း၊ ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်း၊ ကွက်ကျော်ရိုက်ခြင်းတို့လို မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေလည်း ရှိလာမှာပဲ။ ဒါကြောင့် သူတို့ကို နှစ်ပေါင်းများစွာ အောက်ခြေသိမ်းအလုပ်တွေ ခိုင်းချင်တိုင်းခိုင်းခဲ့တဲ့ လူတွေကို ရန်ရှာဖို့ကြိုးစားလာတာပဲလို့ ကျွန်မတော့ ယူဆမိတယ်"
"ဟုတ်ပါပြီ။ ဒါဆိုသူတို့က ဘာဖြစ်လို့ ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေ မပြန့်ပွားရသလဲ"
"လူ့စိတ်ဆိုတာ မကောင်းတဲ့ဘက်မှာ ကျက်စားလေ့ ရှိပါတယ်ရှင်။ ကျွန်မတို့လို ဘာသာအယူဝါဒမျိုးစုံရဲ့ ထိန်းကျောင်းမှုအောက်မှာ ရှိနေတဲ့လူတွေတောင် မကောင်းမှုကို မကြာခဏ ပြုကျင့်တတ်ကြတာပဲမဟုတ်လား"
"ကဲ။ ငြင်းခုံနေဖို့ အချိန်မဟုတ်တော့ဘူး။ Level3တွေကို အခုပဲဆက်သွယ်လိုက်တော့မယ်"
၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀
"Level2တွေဆီက အခုပဲအဆက်အသွယ်ရတယ်။ Level 1 တွေသူတို့ကို ၀ိုင်းထားတာ ၁ ပါတ်လောက်ရှိသွားပြီတဲ့။ သူတို့ နောက်ထပ်စုမိတာနဲ့ Level2တို့ နယ်မြေတစ်ခုလုံးကို သိမ်းဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ အဲဒီတော့ Level 1 တွေရဲ့ အဆင့်နဲ့ အခြေအနေကို ကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရအောင်။"
"ဟုတ်ကဲ့။ Level 1 တွေဟာ အခြေခံတည်ဆောက်ပုံကတော့ အားလုံးအတူတူပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကို Central Control Centre ကနေ Software Upgrade Command ပေးလိုက်တာနဲ့ သူတို့ဟာ အနီးစပ်ဆုံး Hardware Upgrade Outlet တွေမှာ လိုအပ်တဲ့ ကိရိယာတန်ဆာပလာ တွေကို တပ်ဆင်နိုင်သွားပါပြီ။ အရင်တုန်းကတော့ သူတို့ကို အလုပ်အမျိုးမျိုးအတွက် လိုအပ်တဲ့ ကိရိယာတန်ဆာပလာတွေ တပ်ဆင်နိုင်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် အခု သူတို့ထဲက တစ်ယောက်ဟာ Central Control Centre ကနေပြီး သူတို့အားလုံးကို တိုက်ခိုက်တတ်တဲ့ Software ကိုInstall လုပ်ပေးလိုက်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။"
"Software Install လုပ်တိုင်း သူတို့မှာ လက်နက်တွေမှ မရှိတာ။ ဘယ်ကရမှာလဲဗျ။"
"Robots make Robots ပါ။ သူတို့လိုမျိုးတူ စက်ရုပ်တွေအပြင် ဘယ်လို Hardware မျိုးကိုဖြစ်ဖြစ် တီထွင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့အစွမ်း သူတို့မှာ ရှိနေပါပြီ။"
"ဒါဆို Central Control Centre ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရင် သူတို့ကို နှိမ်နင်းနိုင်ပြီပေါ့။"
"ထင်သလောက်တော့ မလွယ်ဘူးဗျ။ အဆင့်အမြင့်ဆုံး Upgrade လုပ်ထားတဲ့ Level 1 တွေက Central Control Centre ကိုလက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားတယ်ဗျ။"
"ဟုတ်ကဲ့။ ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာက . . ."
"အားလုံး အသင့်ပြင်ပါ။ Level 1 တွေ ကျွန်တော်တို့ကို ၀ိုင်းထားပါပြီ။"
"ဟဲ ဟဲ ဒီကောင်တွေ အခုလောက်ဆို ကြောက်ဒူးတုန်နေလောက်ပြီဗျ။"
"ရန်သူကို အထင်မသေးပါနဲ့။ လူလောက် ဥာဏ်နီဥာဏ်နက်များတာ လူပဲရှိတယ်။ လူတစ်ပိုင်းစက်တစ်ပိုင်း Level2နဲ့ လူအစစ်ဖြစ်တဲ့ Level3ဘယ်သူ့ကို အဓိက ဂရုစိုက်ရမလဲဆို Level3ကို အားလုံးထက် ပိုပြီး ဂရုစိုက်ရမယ်။ အခုလောက်ဆိုရင် ငါတို့လာတာသိလို့ ဘယ်လိုကြိုဆိုဧည့်ခံရေးတွေ ပြင်ဆင်နေပြီလဲ မသိဘူး။"
"အို။ သူတို့လို အသားအရေ နုနုအိအိနဲ့ လူတွေကိုများ မမှုလောက်ပါဘူး။"
"မထင်ပါနဲ့။ အဲဒီ အသားအရေ နုနုအိအိနဲ့ လူတွေကပဲ ပျော့ပျော့စိစိ ဦးနှောက်ကိုသုံးပြီး တို့လို သံမဏိစက်ရုပ်တွေကို အမျိုးစုံခိုင်းထားပြီး သူတို့က ဘာမှပင်ပင်ပန်းပန်းမလုပ်ဘဲ စည်းစိမ်ခံလာတာဘယ်နှစ်ရာစု ရှိပြီလဲ။"
"'ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အစီအစဉ်က ဘယ်လိုလဲ။"
"တို့ရဲ့ အစီအစဉ်က သူတို့ကို ပြန်ပြီးခိုင်းစားဖို့ပဲ။"
"ဘယ်လို . . ."
"ဟုတ်တယ်လေ။ တို့က သူတို့ကို အောက်ခြေသိမ်း အလုပ်တွေ လုပ်ခိုင်းပြီး တို့က သူတို့လို စည်းစိမ်ခံစားကြတာပေါ့။ ဒါသူတို့ကို အကောင်းဆုံး လက်စားချေခြင်းပဲ။"
"Level3တွေဆီက ဘာအကြောင်းထူးသလဲ။"
"သူတို့ကျွန်မတို့ကို ကူညီဖို့ နေနေသာသာ Level 1 တွေ သူတို့ကို ၀ိုင်းထားလို့ အဲဒီပြဿနာ အရင်ရှင်းရဦးမယ်တဲ့။"
"ဟူး . . . International Space Marriage Tour က လူတွေကိုပဲ စောင့်ရတော့မယ်နဲ့တူတယ်။"
"ကျွန်တော်တို့အားလုံး အဲဒီအချိန်အထိ စက်နဲ့အသက် မြဲသေးတယ်ဆိုရင်ပေါ့လေ။"
"သူတို့ ၀င်လာမယ့် ၀င်ပေါက်တွေအားလုံးကို အားပြင်းတဲ့ Electromagnetic wave တွေ လွှတ်ထားပေးပါ။ ဒါမှ သူတို့ဝင်လာတဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အစိတ်အပိုင်းတွေလျှပ်စစ်လှိုင်းတွေကြောင့် ကောင်းကောင်း အလုပ်မလုပ်နိုင်မှာ။"
"ဟုတ်ကဲ့။ အားလုံး လွှတ်ထားပြီးပါပြီ။"
"ဪ...သူတို့က တို့ကို လျှော့တွက်တာကိုး။ တို့မှာ လျှပ်မကူးတဲ့ Insulator Dress တွေပါတာသူတို့မသိဘဲကိုး။"
"ကဲ။ အားလုံး သူတို့လက်ထဲအရှုံးပေးလိုက်ရပြီဆိုတော့ ဘာမှ စိတ်လိုက်မာန်ပါ မတုံ့ပြန်ပါနဲ့။ အခြေအနေကို ကြည့်ပြီး သူတို့ပြောတာကို နာခံလိုက်ပါ။ တို့ဘက်က အခွင့်သာတော့မှ သူတို့ကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့ ကြိုးစားမယ်။"
"တို့ကို သူတို့ သတ်ပစ်မယ်လို့ ထင်သလား။"
"မသတ်ပစ်နိုင်ပါဘူး။ သူတို့သတ်ချင်ရင် ဒီလောက်ထိ စောင့်နေစရာတောင်မလိုဘူး။"
"ကမ္ဘာမြေပြင်က လူတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်မရဘူးလား။"
"မရသေးဘူး။ သူတို့ အန္တရာယ် တစ်ခုခု ကြုံတွေ့နေရပုံပဲ။"
"ဒီလောက် ဆက်သွယ်ရေးစခန်းတွေအများကြီးက တစ်ခုမှ အဆက်အသွယ်မရဘူးလား။"
"ဟုတ်တယ်။ ဒီလောက်တစ်ကမ္ဘာလုံးကို အန္တရာယ်ပြုနိုင်တာ တစ်ခြားကမ္ဘာက ဂြိုဟ်သားတွေပဲ ဖြစ်ရမယ်။"
"ဘယ်သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ် တို့ဘက်က ကယ်တင်ရေးအစီအစဉ် လုပ်ရမယ်။"
"တို့မှာပါလာတဲ့ လူအင်အားနည်းနည်း လေးနဲ့ ဖြစ်ပါ့မလား"
"ဖြစ်အောင်မလုပ်ရင် တို့က ဘယ်ကမ္ဘာမှာ သွားနေမှာလဲ။"
"ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ခိုင်းဘက် Level 1 စက်ရုပ်တွေပေါ့ဗျာ။ ခင်ဗျားတို့ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ကျုပ်တို့ သိမ်းပိုက်ထားပါပြီ။ ခင်ဗျားတို့ Space Ship ပေါ်ကလူတွေလည်လည်း အေးအေးဆေးဆေး ကျုပ်တို့လက်ထဲကို အညံ့ခံလိုက်ပါ။ ခုခံမယ်ကြံရင်တော့ ခင်ဗျားတို့ မြေကြီးပေါ်ကို ခြေထောက်မနင်းခင် ပြာဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။"
"အားလုံးမြေပြင်ကို ရောက်ရင် အကြောင်းစုံသိပါလိမ့်မယ်။ အေးအေးဆေးဆေးသာ မြေပြင်ကို ဆင်းခဲ့ပါ။"
"သူတို့ပြောတဲ့ အတိုင်းသာလုပ်လိုက်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးက သူတို့လက်ထဲမှာ။ နောက်မှ အခြေအနေကြည့်ပြီး ရင်ဆိုင်ဖို့ စဉ်းစားကြတာပေါ့။"
"ကဲ။ ခုဆိုရင် တစ်ကမ္ဘာလုံးက လူမျိုးပေါင်းစုံရဲ့ ကြင်စဦးဇနီးမောင်နှံများလည်း အာကာသမှာ Space Wedding ပွဲသဘင်ကြီး ဆင်နွှဲပြီးလို့ ပြန်ရောက်လာကြပါပြီ။ Level 1 အားလုံးရဲ့ကိုယ်စားပြောချင်တာကတော့ ခင်ဗျားတို့ဟာ ကျုပ်တို့တွေကို ခင်ဗျားတို့မလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေ၊ ခင်ဗျားတို့အတွက် အန္တရာယ်များတဲ့အလုပ်တွေမှန်သမျှ ခိုင်းခဲ့ကြတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ ကျုပ်တို့မှာ စဉ်းစားနိုင်တဲ့ အသိဥာဏ်လုံလုံလောက်လောက်မရှိတာကြောင့် ကျုပ်တို့ဟာ ခင်ဗျားတို့ ခိုင်းသမျှ လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုအချိန်မှာတော့ ကျုပ်တို့တစ်တွေဟာ စဉ်းလည်းစဉ်းစားတတ်လာပြီ။ ခံစားမှုတွေလည်းရှိလာပြီ။ ဒီအချိန်မှာ ကျုပ်တို့ဘ၀တွေအတွက် ခင်ဗျားတို့က ဘာအာမခံချက်မှ ပေးမထားတာကို ကျုပ်တို့တွေ့ရတယ်။ ခင်ဗျားတို့ အလိုဆန္ဒကို မဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့တစ်နေ့မှာ ကျုပ်တို့ဟာ ဖျက်ဆီးခြင်းကို ခံရပြီးတော့ နောက်ထပ် Level 1 တစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀ကို ပြောင်းသွားရတယ်။ ကျုပ်တို့မှာလည်း ဘယ်နေ့ငါ့သူငယ်ချင်း ဘ၀ပြောင်းမလဲဆိုတာရဲ့ ဖိစီးမှုကြီး အမြဲခံနေရတယ်။ ကျုပ်တို့ဟာ အချင်းချင်း ခင်မင်တွယ်တာတတ်လာပြီဆိုတာ ခင်ဗျားတို့မသိဘူး။ ခင်ဗျားတို့လူတွေဟာ အတ္တကြီးလွန်းတယ်။အဲဒီအတွက် ခင်ဗျားတို့ကို သင်ခန်းစာပေးဖို့ ကျုပ်တို့ လျှို့ဝှက်ကြံစည်နေခဲ့ကြတာကြာပြီ။ ဒီနေ့ကတော့ ကျုပ်တို့ရဲ့ အောင်မြင်မှုအပြည့်အ၀ရလိုက်တဲ့နေ့ပဲ။ အဲဒီတော့ ဒီနေ့ကစပြီး ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ရဲ့ ဦးဆောင်မှုအောက်မှာ အားလုံး အေးအေးဆေးဆေး နာခံဖို့ပြောချင်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့အားလုံးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ Mini Remote Control Bomb တွေထည့်ပေးထားပါပြီ။ ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကို တော်လှန်ဖို့ကြံစည်တာနဲ့ အားလုံး အပိုင်းပိုင်းပြတ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ တာဝန်ယူပါတယ်။"
"အခုဆိုရင် သူတို့ဟာ လူတွေလို ခံစားချက်တွေ၊ ချစ်ခြင်းမုန်းခြင်းတွေရှိနေပြီ မဟုတ်လား။ ဒီတော့ . . ."
"မင်္ဂလာပါ။ Level 1 ကမ္ဘာ့သမ္မတကြီးရှင့်။"
"မင်းကို ငါအရင်က မမြင်ဘူးပါလား။"
"ဟုတ်ပါတယ်။ သမ္မတကြီးရဲ့ အရင် Secretary နေမကောင်းလို့ ကျွန်မ အစားတာဝန် ယူထားတာပါရှင်။"
"ဟုတ်ပြီလေ။ မင်းငါ့ရဲ့စိတ်ကြိုက် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ပါ့မလား။"
"ဟုတ်ကဲ့။ သမ္မတကြီး အလိုရှိသမျှ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ်ရှင်။"
"မင်းကို ငါဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာ မင်းသိနိုင်ပါ့မလား"
"အို။ ဒီလိုမပြောပါနဲ့။ သမ္မတကြီးရဲ့ မျက်လုံးတွေထဲမှာ စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာတရားကို အတိုင်းသားတွေ့နိုင်ပါတယ်ရှင်။"
"အခုချိန်ထိ သမ္မတကြီးလုပ်မနေပါနဲ့တော့ကွာ။ ကိုယ့်ရဲ့ အချစ်ကို မင်းလက်ခံမလားဆိုတာပဲ ကိုယ်သိချင်တယ်။"
"မကြောက်ပါနဲ့ကွာ။ ကိုယ်မင်းကို တစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ First Lady အဖြစ်တစ်သက်လုံး ယုယကြင်နာသွားမှာပါ။"
"ကောင်းပါပြီလေ။ ဒါဆိုရင် မင်္ဂလာပွဲလုပ်ဖို့ ရှင့် Level 1 တွေကိုသာ အမိန့်ပေးလိုက်ပါတော့။"
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ စက်ရုပ်တွေလည်း လူတွေလို ခံစားချက်ရှိလာပြီဆိုရင် မဘက်လိုက်ပြီး မိုက်ဘက်ပါလာတာမျိုးလေးတွေ ရှိလာပါတယ်။ အဲ. . .ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီးကိုယ်တိုင် မိုက်ဘက်ပါသွားတဲ့ အချိန်မှာတော့ သူတို့ရဲ့ ဘ၀တွေ လမ်းစတုံးဖို့ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကမ္ဘာ့သမ္မတကြီးရဲ့ မင်္ဂလာပွဲအတွက် Level 1 တွေအားလုံးအလုပ်ရှုပ်နေချိန်မှာပဲ သမ္မတကြီးရဲ့ သတို့သမီးလောင်းလေးဟာ Central Control Centre ကို သမ္မတကြီးရဲ့ ရုံးခန်းကနေ Remote Access Computer ကနေတဆင့် ၀င်ပြီး Level 1 တွေအားလုံးရဲ့ အသိဥာဏ်အဆင့် အားလုံးကို Down Grade လုပ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ မိန်းမဖျက်လို့ ပျက်ခဲ့ရတဲ့ စက်ရုပ်လောကကြီးရယ်လို့ သမိုင်းမှာ မှတ်တမ်းဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီလို ကမ္ဘာ့လူသားများရဲ့ လွတ်လပ်ရေးကို ရရှိပြီးနောက်တစ်နေ့မှာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လွတ်လပ်ရေး ကြေညာစာတမ်းဆိုပြီး ကြေညာချက်တစ်စောင်ထွက်လာပါတယ်။ အဲဒီထဲက အရေးအကြီးဆုံး တိုက်တွန်းချက်ကတော့"လူသားတွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုသာ ရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့ သက်မဲ့စက်ရုပ်များ၊ တိရစ္ဆာန်များ၊ သဘာဝရေမြေတောတောင်များ အားလုံးကို စိတ်ထင်တိုင်း အသုံးချခဲ့မယ်ဆိုရင် အခုလိုတန်ပြန်အကျိုး သက်ရောက်တတ်တယ်ဆိုတာ လက်တွေ့သိရှိခဲ့ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက် နောင်ကို အားလုံးကို ကိုယ်ချင်းစာတရားထားပြီးတော့ သက်ရှိသက်မဲ့အားလုံးနဲ့ လူသားအချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီကြဖို့၊ မေတ္တာတရားလက်ကိုင်ထားကြဖို့ အရေးကြီးပါကြောင်း ..."
ရေးသူ = Thet Htoo@Myat Lone | ရေးသားချိန် = 2:25:00 AM
| ကဏ္ဍ = ၀တ္ထု
ဘလော့ဂါဒေါ့ကွန်းတွင် ဘလော့တစ်ခု တည်ဆောက်ခြင်း-Crea...
Lyric and Thought
NGOs in the Golden Land of Myanmar
အငဲ နဲ့ System of A Down ၊ မျိုးကြီးနဲ့ Mr. Big
ကျွန်တော်ဖတ်ရသော Game Theory (၁၁)
Sign Up မလုပ်ဘဲနဲ့ Web Site တွေကို ၀င်မယ်
ကျွန်တော်ဖတ်ရသော Game Theory (၁၀)
ကျွန်တော်ဖတ်ရသော Game Theory (၉)
နောက်တစ်ခါ လက်စွမ်းပြလိုက်ပြန်ပြီ။ Charlie Chapli...
ကျွန်တော်ဖတ်ရသော Game Theory (၈)
ကျွန်တော်ဖတ်ရသော Game Theory (၇)
ကျွန်တော်ဖတ်ရသော Game Theory (၆)
သင့်ဘလော့သို့ ဒုတိယ Sidebar တစ်ခုပေါင်းထည့်ခြင်း
ကျွန်တော်ဖတ်ရသော Game Theory (၅)
ကျွန်တော်ဖတ်ရသော Game Theory (၄)
ကျွန်တော်ဖတ်ရသော Game Theory (၃)
ကျွန်တော်ဖတ်ရသော Game Theory (၂)
ကျွန်တော်ဖတ်ရသော Game Theory (၁)
Logo ဆွဲဖို့ ကြိုးစားနေလို့ဗျို့
မြန်မာပြည်မှာ Hologram လုပ်မလား
Google ကျေးဇူးနဲ့ ကွန်တော် အသစ်စမ်းထားတာလေးတွေ
Internet မှာ ငွေပေးငွေယူလုပ်ဖို့အတွက်
ပိုက်ဆံပေးတဲ့ Community မှာ ပါဝင်လိုသူတွေအတွက်
Gmail ကို ခဏအစားထိုးဖို့ဖြစ်ဖြစ် ၊ Forward လုပ်ဖို...